Sawirro:- Taliska NISA ee KGS oo howlgal ay sameeyeen kusoo qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab – XAMAR POST
Sawirro:- Taliska NISA ee KGS oo howlgal ay sameeyeen kusoo qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Howlgal qorsheysan oo uu hoggaaminayay
Taliyaha Hay,adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Koonfur Galbeed oo laga sameeyay Deegaano Hoosyimaada Magaalada Baydhabo, waxaa ay kusoo qabteen Xubno ka tirsanaa Al-shabaab.
Qoraal kasoo baxay Taliska NISA ee Koofur Galbeed ayaa lagu yiri “Taliyaha Hay,adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Koonfur Galbeed ayaa Horkacayey Howlgalkan, kaas oo ujeedkiisa ahaa Bacsiga Maleeshiyaadka Arxanka daran ee Argigixisada Alshabaab ee ay Sameeyeen Ciidanka Hay,adda Nabad Sugida iyo Sirdooonka Koonfur Galbeed kaasi oona laga Sameyey Deegaano Hoosyimaada Magaalada Baydhabo oo ay kamid ahaayeen Goofgaduud Shabeelow,Abdurug,Buula tugeer,Awees emed,Jidoow,Safriya iyo Aliyow Muumin.”
Sidoo kale, Taliska ayaa sheegay in howlgalkaan oo qaatay Sacado ay kusoo qabteen Xubno sare oo ka tirsan Al-shabaab sidoo kalena ay kusoo fureen Dad Maxaabiis ahaa oo Al-shabaab u xirnaa.
“Howlgalka oo qaatay Sacado islmarkaana uu Hogaaminayey Taliyaha Hay,adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo qab qabtay Horjoogiyaal Argigixisada uqaabilsanaa dhibaataynta Shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan iyadoona sidoo kale laga soo furey Dad Maxaabiis ahaa oo Argigixisada Uxirnaa” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Taliska NISA ee DG Koofur Galbeed Soomaaliya.
Sidoo kale, qoraalka NISA ayaa lagu shesgay in howlgalka uu ujeedkiisu ahaa mid bartilmaameed ah kaas oo Al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin DG Koofur Galbeed.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Ciidanka Nabad sugida oo Bartilmaameed u ah sidii Argigixisada ay ugu sifayn lahayeen Deeganada Koonfur Galbeed ayna uga Hortagi lahayeen Falalka Argigixisada ay ku dhibaateyaan Shacabka Soomaaliyeed ayaa la faray Qeybaha kala Duwan Bulshada Deegaanka Goofgaduud Shabeelow inay la shaqeyaan Laamaha Amniga si looga qaado Baadka iyo Beegsiga Argigixisada ay ku hayso Shacabka Soomaaliyeed.”